Fandroahana fifanarahana ny fe-potoana
Ny fandroahana na ny fametraham-pialàna ao amin’ny fifanarahana dia mahazo afa-tsy ao amin’ny toe-javatra izay misy fotsiny antony izay misakana ny fitohizan’ny asa ny fifandraisana. Ny fifanarahana raikitra-teny hoe asa dia ny fifandraisana izy noho ny faharetany sy mamaha ny tenany avy hatrany ao amin’ny expiry. Ny fandroahana ny mpiasa eo amin’ny fototry ny fotoana deteterminato talohan’ny expiry ny fifanekena (ante tempus) dia omena afa-tsy ao amin’ny toe-javatra manaraka ireto: Ny anarana mpanao lalàna mifehy ny fanesorana alohan’ny faran’ny (ante tempus) ny fifanarahana raikitra ny fe-potoam-miasa ao amin’ny andininy faha- ny italiana sivily fehezan-dalàna. ‘Ny tsirairay ny voan’ny ny antoko mety hiala amin’ny fifanekena mialoha ny expiry’ ny teny hoe, raha toa ny fifanarahana dia ny fotoana voafetra na tsy misy taratasy, raha ny fifanarahana dia ny indeterminate duration, ao ny zava-nitranga ny antony iray izay tsy hamela ny fitohizan’ny, na dia vonjimaika, ny ny fifandraisana. (art.
Ao amin’ny raikitra-teny hoe ny fifanarahana, ny fandroahana mety ho antony. Ny marina hahatonga dia tonga saina ihany ny zava-misy manokana ny maha zava-dratsy, mety hanohintohina irreparably ny fifandraisana ny fifampitokisana eo amin’ny mpampiasa sy ny mpiasa, amin’ny fomba izay mba hanakanana ny fitohizan’ny, na dia vonjimaika, ny asa ny ny fifandraisana. Ny zava-misy dia afaka ihany koa ho extraneous ny tontolon’ny ny fifanekena momba ny asa (e.g.
fanamelohana ho an’ny lehibe sy ny heloka bevava)
Eo anatrehan’ny fotsiny ny antony, ny antoko mety manatanteraka ny fanesorana ny ante tempus ny asa ny fifanarahana eo amin’ny endriky ny fametraham-pialàna, raha toa ka ny mpiasa tamin’izany fotoana izany dia tapa-kevitra ny hanolotra ny taratasy fametraham-pialana hametra-pialana avy amin’ny fifanarahana, na fandroahana, raha ny mpampiasa dia mba te-hanakana ny fifandraisana amin’ny mpiasa mandritra ny fotoana manokana. Dia fa inapplicable ny fandroahana azy ho voamarina ny antony ny mpiasa mandritra ny fotoana manokana (ohatra: fampihenana ny asa fandraharahana) na subjective sy ny tanjona.
Fandroahana tsy ara-drariny
Ao ny raharaha ny tsy ara-dalàna fandroahana mpiasa manokana ho an’ny andro tsy misy antony, ny mpiasa mandritra ny fotoana manokana, dia ho mitondra ny lohateny hoe ny onitra noho ny fahavoazana mitovy ny habetsahan’ny ny karama tsy voaray amin’ny fotoana fanafoanana ny daty ny expiry ny fifanekena asa. Ny fandroahana ny mpiasa mandritra ny fotoana manokana mety tsy ho ampiharina amin’ny ara-dalàna ny fenitra momba ny fiarovana amin’ny fandroahana tsy ara-drariny ny maharitra ny mpiasa, izay ihany no ampiharina amin’ny fifanarahana tsy voafetra. Ao ny raharaha ny fametraham-pialana raha tsy hiteraka fotsiny ny mpiasa alohan’ny expiry date dia ny mpiasa ny tenany ho toy ny iray amin’ireo fikambanana tsy manao antoko ny fifanarahana sy ny fananana ny handoa onitra ny mpampiasa
Inona no Manaporofo ny Fananana ara-Tsaina Halatra